Dr. Romantic – Gold Channel Movies
Episode 1 Jan. 06, 2020
Episode4Jan. 14, 2020
Episode6Jan. 21, 2020
Episode9Feb. 03, 2020
Episode 10 Feb. 04, 2020
Episode 12 Feb. 11, 2020
Episode 15 Feb. 24, 2020
Episode 16 Feb. 25, 2020
ဆရာဝန်လောက အကြောင်း ၊ ဆေးလောကအကြောင်းတွေကိုရိုက်ထားတဲ့ ကိုရီးယားကားတွေကနေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဒီ ကားမှာတော့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်လောက အကြောင်းကို ရိုက်ထားတာပါ။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဆိုတဲ့ အတိုင်း တစ်ကားလုံး Operation Room ထဲကနေကို မထွက်ရတာများပါတယ်။ ရောဂါထူူးထူးဆန်းဆန်းတွေကိုလည်း ကြားဖူးနိူင်သလို ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေရဲ့ ဆေးပညာကျွမ်းကျင်မှုတွေ ၊ သူတို့နိူင်ငံရဲ့ ဆေးပညာ တိုးတက်ပုံတွေကို ရင်သပ်ရှုမော ကြည့်ရမှာပါ။
Teacher Kim ဇာတ်ကားက Season 1အနေနဲ့ထွက်ပြီးပါပြီ။ IMDb က Rating 8/10ရထားခဲ့တာပါ။ခု Season 2မှာလည်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကြည့်ရူရမှာပါ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက တက္ကသိုလ်ဆေးရုံတစ်ခုမှာ အရမ်း ရမ်းကိုတော်တဲ့ဆရာ ဝန် ” တစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်တောင် တော်လဲဆို သူခွဲစိတ်ကုသလိုက်တဲ့သူတိုင်း လူနာတိုင်း အကောင်းပကတိ အကုန်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ ကို နာမည်ကြီးတာပါ။ သူ့နာမည်က ဒေါက်တာ ” Boo Yong Joo” (Han Suk Kyu )။ တစ်နေ့ သူ ဆေးလောက ကနေ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားတယ်။
တစ်နေ့ တစ်ခြားနာမည် အသစ်တစ်ခု ”Teacher Kim” ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ မြို့ပြင်က ဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်တစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်။ သူကတော့ ”Boo Ying Joo”ပါဘဲ။ သူဘာလို့ တိတ်တဆိတ် ပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှ ပြန်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကို Season 1 ကြည့်ဖူးသူတိုင်း သိမှာပါ။
ဒီ Season2မှာကော ဘယ်လို ခွဲစိတ်တာတွေကို ကြည့်ရူရမလဲ။ စွန့်စွန်းစားစားနဲ့ လူနာကိုပဲ ကြည့်ပြီး အသက်ကယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် မြန်မြန်နဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ခွဲစိတ်ပုံ ခွဲစိတ်နည်းတွေကို တွေ့ရမလဲ။
Season 2မှာ ဆိုရင် မင်းသမီး
Cha Eun Jae(Lee Sung Kyung) က ဒုတိယနှစ် ဆေးကျောင်းသူ အနေနဲ့ အတွေ့အကြုံ နည်းနည်းနဲ့ မကြောက်မရွံ့ လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူ အနေနဲ့ ပါဝင်သွားမှာပါ။
မင်းသားကတော့Seo Woo Jin
(Ahn Hyo Seop)ပါ ။ ဒုတိယနှစ် ဆေးကျောင်းသား Seo Woo Jin ဟာ မထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ပြီး သူ့ဘဝမှာ ပျော်စရာ နတ္ထိဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပါဝင်သွားမှာပါ။
”Doldam ” ဆိုတဲ့ ဆေးရုံလေးမှာ ရှိတဲ့ Teacher Kim ၊ မင်းသမီး Cha Eun Jae ၊
မင်းသား့Seo Woo Jinတို့ တွေ့ဆုံပြီး ဘယ်လို တွေ ခွဲစိတ်ကုသမလဲ ?
သူတို့နှစ်ယောက်ကကော ဘယ်လိုတွေ သင်ယူမလဲ?
Teacher Kim ကကော အပြောဆိုးသလောက် ဘယ်လိုတွေ ခွဲစိတ်ပညာရပ်ကို သင်ပေးမလဲ ?
Flower crewထဲက ယူတို့ရဲ့ အချစ်တော် Eun ကလည်း Supporting character ကနေလည်း ပါဝင်ထားတာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ
Romantic ဆန်ဆန် အခန်းတွေလည်း ပါသလို သွေးတွေနဲ့ချည်း ခွဲစိတ်ပုံတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Romantic Doctor , Teacher Kim ကို ဒီည 6/1/2020မှာ ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ Season 1ကို 2016က ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး လေးနှစ်အကြာမှ Season 2က ထွက်လာတာမလို့ ဘယ်လိုတွေ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ကြည့်ရမလဲ ဆိုတာကတော့ ကိုရီးယား စံတော်ချိန် 22:00မှာ Monday and Tuesdays တိုင်း ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာမလို့ မြန်မာ ဘာသာပြန် ကိုတော့ Tuesday and Wednesday တိုင်းမှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရူနိူင်ပါပြီ။
Phyowai PyaitJanuary 7, 2020Reply
Season 1 လေးပါပြန်တင်ပေးပါလား
Hnin OoJanuary 14, 2020Reply
AuzuDaiwiJanuary 9, 2020Reply
Plz repost Season 1
Na DiaJanuary 10, 2020Reply
Thank you so so much GoldChannel
BoyJanuary 14, 2020Reply
အပိုင္း ၃ မတင္ဘူးလား
Wai WaiJanuary 14, 2020Reply
Htar Htet Htet LinJanuary 15, 2020Reply
Epi3မရေသးဘူးလားဟင္ အရင္ဆို GC က ျမန္ပါတယ္ အခုတေလာ သိပ္မတင္ေပးေတာ့သလိုပဲ မင္မင္တို႔ မအားလို႔လားဟင္
MMJanuary 15, 2020Reply
ZweJanuary 29, 2020Reply
ZuzuJanuary 16, 2020Reply
MinJanuary 16, 2020Reply
LarryJanuary 16, 2020Reply
YeWinJanuary 29, 2020Reply
waiting new ep
A K TJanuary 17, 2020Reply
Paing PaingJanuary 17, 2020Reply
khakhaJanuary 17, 2020Reply
LarryJanuary 17, 2020Reply
Ep3nk4set m tin tot buu lr : /
khineJanuary 17, 2020Reply
MgJanuary 20, 2020Reply
MgJanuary 23, 2020Reply
Ep78 please
ZuZuJanuary 29, 2020Reply
KhineFebruary 4, 2020Reply
aungFebruary 12, 2020Reply
ep 12 yaw
May PhyoeFebruary 12, 2020Reply
Ep 12 တင်ပေးပါဦး ဆရာဝန်ကားဆိုတော့ Eng နဲ့ကြည့်ဖို့ရန် အဆင်မပြေလို့ပါ။
May Thu MaFebruary 18, 2020Reply
Ep 13 Link က Down လို့မရဘူး အသစ်လေးတင်ပေးပါလား
Saw Min KhantFebruary 22, 2020Reply
Season 1 pls
HunFebruary 23, 2020Reply
Kaung KhantFebruary 25, 2020Reply
Min waiFebruary 26, 2020Reply
Win Min ThantMarch 23, 2020Reply
Season 1 please!
Ya Wai NaingMarch 28, 2020Reply
မင်မင်ရှင့် romantic doctor season လေးတင်ပေးပါရှင့်
Romantic Doctor teacher kim season 1လေးတပေးပါရှ့်
Win Min ThantApril 6, 2020Reply
Yu NgeMay 4, 2020Reply
Please re-upload Season (1)!!!!!
Hsu Myat NoeMay 5, 2020Reply
Please repost season 1
Kaung HsetJune 26, 2020Reply
Season 1 plz